Umaka: quack cave
UPostano uguqula isikhungo sezemidlalo se-Sports Social Media Command
NgoLwesibili, Novemba 12, 2013 NgoLwesine, Juni 18, 2015 Douglas Karr
Sekuguqukile kancane kusukela izikhungo zemiyalo yezokuxhumana zifike endaweni yesehlakalo. Kungenzeka ukuthi ufunde ngabo kwezemidlalo lapho abangane bethu kwaRadious bethuthukisa isikhungo sokuqala semiyalo yezokuxhumana seSuper Bowl e-Indianapolis. Ukhiye wesikhungo somyalo bekuyizinhloso ezine… Ukuphepha - phendula kuqala kunoma iyiphi inkinga egxile ekuphepheni noma enkingeni. Isevisi - phendula kunoma iyiphi ingxoxo engemihle ehlobene nedolobha noma umcimbi. Ukufunda - yazi ukuthi kwenzekani